Maleeshiyaadka la magac baxay Macawiisley oo dagaal ku dhawaaqay. – Hornafrik Media Network
Maleeshiyaadka la magac baxay Macawiisley oo dagaal ku dhawaaqay.
By HornAfrik	 On Dec 27, 2018
Muqdisho ( Hornafrik)-Xiisad dagaal oo u dhexeysa Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ah oo la Magaca baxay Macawiisleey ayaa weli waxaa ay ka taagan tahay deegaano ka tirsan Gobalka Shabeelaha Dhexe.
Deegaanada ay joogaan dadka la magac baxay macawiisley ayaa waxaa ka mid ah , Buurdacaar oo hoostaga degmada Aaadan Yabaal ee Gobolka Shabeellaha dhexe iyo deegaano kale.
Mid ka mid ah Saraakiisha hogaaminaysa Maleeshiyaadka la magac baxay Macawiisley ayaa waxaa uu shacabka ka dalbaday in ay la dagaalamaaan Al-Shabaab, isagoona sheegay in dagaal adag ay la gali doonaan Al-Shabaab.
Sidoo kale Waxaa Maamul gobaleedyada, dowlada dhexe iyo beesha caalamka ka dalbaday in ay caawiyaan dadka shacabka ah ee la dagaalamaya Al-Shabaab, islamarkaana waxaa uu tilmaamay in dhawaan ay bilaabi doonaan howlgal ka dhan ah Al-Shabaab, isagoona sheegay in deegaano hor leh ay ka saari doonaan.
Shacabka la magac baxay macawiisley ee is uruursaday ayaa dhawaan warbaahinta waxa ay u sheegeen in ujeedada ay Dagaalamayaasha Al Shabaab ula dagaalamayaan ay tahay inay u adkeysan waayeen dhibaato ay sheegeen in Al Shabaab ay ku hayaan dadka degaanka.
Waxaana xusid mudan Dadka shacabka iyo Al-Shabaab dhowr jeer ay ku dagaalameen Gobalka Shabeelaha Dhexe.
Madaxweynihii hore ee Hirshabelle oo ku baaqay in la damiyo Colaada ka taagan Maxaas
Dilalka ka dhaca Boosaaso oo Kordhay